ဟာသ Archives - Page4of9- Focus Myanmar
သဉ္ဇာဂျင်းကျော် ခေါင်းပေါ်ခြင်းအပေါ်….သူတို့ဝေဖန်ပေးခဲ့ကြသည်။ :-) :-)
” အခုလို ဖော်ထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်..
ကိုယ့်အနေနဲ့ အရမ်းလည်း ရင်ခုန်ရတယ်
Myanmar Idol အကြောင်း ရေးထားတာတွေ့လို့ သဘောကျလို့ ဖတ်ရအောင် ကော်ပီကူးလာတာပါ
Myanmar Idol အကြောင်း ရေးထားတာတွေ့လို့ သဘောကျလို့ ဖတ်ရအောင် ကော်ပီကူးလာတာပါ။ ကျနော်ရေးတာမဟုတ်သလို။ဘယ်သူရေးမှန်းလည်း မသိပါဘူး။မဆဲကြပါနဲ့ ကြောက်တတ်လို့ပါ။ 😀
ချစ်သူ က ရေချိုးပေးပါဦး ဟု ပြောသောအခါ
…. ကလင် ကလင် ကလင် ….
အိပ်ကောင်းနေမှ ဘယ်က ဖုန်းလဲဟ
ringtone ပိတ်မထား မိတာ ငါ့အမှား
ခါတိုင်း အိပ်ရင် ပိတ်ထားတယ်
အခုခေတ် ဖေ့စ်ဘွတ် ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုဒီလို 😁
“ပြောလေ ခေး ရဲ့”
Troller တွေရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် ကုလားသီချင်းနဲ့ ကခဲ့ရတဲ့ စိုင်းစိုင်းနဲ့ နေခြည်ဦး video
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှုိင် ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဆိုတော်လောကမှာ သူအနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်စဉ်ကပင် ခုအချိန်ထိ အောင်မြင်မှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းက ပရိသတ် အခိုင်အမာရရှိထားသူ ဖြစ်သလို သူ့ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ Trolနေကြတဲ့ Trollerတွေကြောင့်လဲ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ စိုင်းစိုင်းကို တွေ့နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုက်ဖမ်းသူနဲ့ ကလေး အိပ်တုန်း ခိုးစားကြရအောင်ဆိုတဲ့ လင်မယား တွေ့ကြသောအခါ
ကျနော်တို့ မခိုးရပါဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရယ်..”“ဘုရားပေးပေး ကျမ်းပေးပေးပါ ကျမတို့ ဒါမျိုးအကျင့်လည်းမရှိရပါဘူးရှင်..”“ကဲ..ဟုတ်ပီ ကိုတင်လှ ခင်များကြက်ကို သူတို့လင်​မယားခိုးပါတယ်လို့စွပ်စွဲရအောင် ခင်များ က ဘာအထောက်အထားနဲ့စွပ်စွဲရတာလဲ..”
“ရှိပါတယ်ဆြာ.. အင်မတန်ကိုခိုင်လုံပါတယ် ဒီသတင်းက အတွင်းလူယုံကနေတဆင့်ပေါက်ကြားတာပါ ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းတာလည်းမဟုတ်ရပါဘူး..”
ညီမ ကို ချစ်ရင် ညစာစားသွားပါလား :-) :-)
” လာ လာ သူငယ်ချင်း ….
မင်း ငါ တို့ရပ်ကွက်ထဲ ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက်လေး စော် ချောချောလေးအိမ် လိုက်ပို့ပေးမယ် ”
” ဖြစ်ပါ့မလားကွာ ”
ငါတို့ဆီက ဧည့်သည်လာရင် မသိလည်း ရိုက် မထုတ်တတ် ပါဘူး
ဧည့်ဝတ်ကျေအောင် ဧည့်ခံတတ်ကြ ပါတယ်ကွ ”
” အဲဒါ ဆိုရင်လည်း သွားကွာ “
ဂျပန် နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်း ပေးခဲ့တဲ့ ရေဘဝဲ သတ်ခံရ
ရာဘီယို လို့ ခေါ်တဲ့ ပစိဖိတ် ရေဘဝဲ ဟာ ဂျပန် အသင်း ကန်ခဲ့တဲ့ အုပ်စု ပွဲစဉ် တွေကို ခန့်မှန်း ပေးခဲ့ရာမှာ တိကျတဲ့ ခန့်မှန်းမှုတွေ လုပ်ပေး နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဇူလိုင် လ၂ ရက်နေ့ က ကစားခဲ့တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ နဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ ဂျပန် အသင်း နိုင်မယ်လို့ ရာဘီယို က ခန့်မှန်း ပေးခဲ့တာပါ။
အဲဒီ ဟောကိန်း ဟာ မှားယွင်း ခဲ့ပြီး ဂျပန် အသင်း ဟာ နာကျင် အချိန်ပို မှာ ဂိုး ပေး လိုက်ရပြီး ၃ ဂိုး ၂ ဂိုး နဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ပါတယ်။
ရှမ်းမလေးကို ယူလိုက်ကာမှ ခွေးလုံးလုံး ဖြစ်သွားရတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်
သူငယ်ချင်း တယောက် ရှမ်းမလေး တယောက် နဲ့ အကြောင်း ပါတယ် …
သူတို့ နှစ်ယောက် လက်ထပ်ပြီးတော့ ဒီကောင်က ရှမ်းမလေး အိမ်မှာပဲ လိုက်နေ ရတယ် …လက်ထပ်ပြီးလို့ တပတ် ဆယ်ရက်လောက် အကြာမှာ ဒီကောင်နဲ့ ပြန်တွေ့တော့ …နှစ်ယောက်သား ဝမ်းသာ အားရ အလ္လာပ သလ္လာပ ပြောကြ ဆိုကြရင်း သူက ရင်ဖွင့် ပါတော့တယ် ။
နေရာတကာမှာ အသန့်ကြိုက်လွန်းတဲ့ သတို့သား ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည… တစ်ရှူးလေးနဲ့ သုတ်ပါရစေ …
ချစ်​သူ နှစ်​​ယောက်​ ရှိတယ်​
​ကောင်​​လေးက သိပ်​ အသန့်​အပြန့်​ ကြိုက်​တာ
​ကောင်​မ​လေးကိုလည်း အရမ်း ဂရုစိုက်​တယ်​
စား​သောက်​ဆိုင်​များ နှစ်​​ယောက်​သား ထိုင်​မိရင်​
​ကောင်​မ​လေး ထိုင်​မဲ့ခုံ ​ကောင်​မ​လေး ​သောက်​မဲ့ ​ရေခွက်​က အစ
တစ်​ရူး​လေးနဲ့ စိတ်​​ကျေနပ်​​အောင်​ သုပ်​​ပေးပြီးမှ စားခိုင်း​ သောက်​ခိုင်းတာ